Carolina Molina. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Los ojos de Galdós | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carolina Molina. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Los ojos de Galdós
Foto: Carolina Molina, profaịlụ Facebook.
Caroline Molina, odeakụkọ na onye edemede nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, a mụrụ na Madrid, mana ejikọtara ya na Granada ruo ọtụtụ afọ. Site n'ebe ahụ ọrụ mbụ ya ga-apụta na 2003, Ọnwa na ndị Sabika. Ha na-eso ya karịa Mayrit n’etiti mgbidi abụọ, Albayzin nrọ, Ndụ Iliberri o Ndị nche nke Alhambra. Y nke ikpe azu bu Anya Galdós. Enwere m ekele maka oge gị na obiọma gị maka nke a Ajụjụ ọnụ ebe ọ na -agwa anyị gbasara ya na ihe niile ntakịrị.
Carolina Molina - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Anya Galdós ọ bụ akwụkwọ ọhụụ gị, ebe ị siri pụọ isiokwu nke akwụkwọ ndị gara aga. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na ebe echiche a siri bido?
cm: Site na nwata, ịgụ akwụkwọ Galdós na -eso m n'oge ọkọchị ọ bụla. Ọ bụ ebe m kwuru na akụkụ m nke Madrid, dị ka Federico García Lorca n'akụkụ m nke Granada. N’ihi ya, ihe dị ka afọ itoolu ma ọ bụ afọ iri gara aga, echiche ide akwụkwọ banyere Don Benito Pérez Galdós, bụ́ onye akwụkwọ akwụkwọ m mụtara ide ihe, metụrụ m n’ahụ́. Ebum n'uche m bụ ike a Akwụkwọ akụkọ Galdosian. Nye ọhụụ zuru oke nke ụwa gbara ya gburugburu: mmekọrịta chiri anya ya, ụdị onye ọ bụ, ụzọ ọ ga -esi kọwaa akwụkwọ akụkọ ya ma ọ bụ otu o chere ihu na mbido ihe nkiri ya. Ugbu a ọ karịrị ihe ntụaka, ọ bụ ezigbo enyi m na-agakwuru.
AL: I nwere ike icheta akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
cm: N'oge na-adịbeghị anya, na njem, ọ pụtara mbụ m akụkọ. Edere ya na mpempe akwụkwọ nnyapade dị iche iche. Ọ bụ akụkọ nne m gwara m na m megharịrị ya. Ama afọ iri na otu. Mgbe ahụ akụkọ akụkọ ụmụaka ndị ọzọ mechara bụrụ akwụkwọ mbụ, abu na ihe nkiri. Ọtụtụ iri afọ mgbe e mesịrị akụkọ ihe mere eme akwụkwọ ga-abịa. Akwụkwọ mbụ m gụrụ bụ Womenmụ obere ụmụ nwanyị. Mụ na ya mụtara ịgụ, m ga-agabiga ya n'olu dara ụda n'ime ụlọ m.
cm: Mgbe, na-enweghị obi abụọ. Agaghị m achọpụta ihe ọ bụla dị ọhụrụ: Cervantes, Federico García Lorca na Benito Pérez Galdós. Ha atọ nwere ọtụtụ isi ihe jikọrọ m na echere m ha niile na akwụkwọ m.
cm: Jo njem, na Womenmụ obere ụmụ nwanyị. Mgbe m gụrụ akwụkwọ akụkọ ahụ enwere m mmetụta nke ijikọ ya na ọ dị m ka ọ nwere ọtụtụ ihe metụtara mkpebi m ịbụ onye edemede.
CM: Adịghị m ahụ oke iwe. Achọrọ m naanị gbachi nkịtị, ezigbo oku na iko nke tii.
cm: Ruo n'oge na-adịbeghị anya, oge kachasị mma iji dee bụ n'ehihie, mgbe onye ọ bụla na-ehi ụra. Ugbu a, àgwà m agbanweela Enweghị m oge a kara aka. Ọ bụghị ebe, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ozuzu ebe obibi (ebe m nwere tebụl m) ma ọ bụ na mbara ala.
cm: N'ezie. Na akụkọ (obere akụkọ) na Teatro. M na-omiiko banyere edemede akụkọ na biography, ụdị ndị m gụrụ na agụụ iji dee onwe m.
cm:Ana m agụ abụọ ndu, nke onye akụkọ ihe mere eme Granada si s. XVI na nke mara oke agwa sitere na Spanish Renaissance. Anaghị m ekwu aha ha n'ihi na ọ ga-ekpughe isiokwu nke akwụkwọ m ọzọ. M amalitewokwa anthology na Remedios Sánchez mere na abụ nke Emilia Pardo Bazan (Idebe furu n'oké osimiri).
Banyere ihe m na-ede ugbu a, ịnọ na mpaghara akwụkwọ, raara m onwe m nye kwadebe nchịkọta, ihe osise edemede, na akụkọ mgbe ahụ nyere m aka ihu usoro ịme akwụkwọ ahụ. Ọ bụ ogologo oge ma na-agwụ ike ma ọ dị mkpa. Mgbe ahụ, na ụbọchị ọ bụla, mkpa ịde ga-abịa wee bụrụ ọkachamma n'egwuregwu akwụkwọ.
AL: Olee otu i chere ọnọdụ mbipụta akwụkwọ ahụ dị? Ọtụtụ ndị edemede na ndị na-agụ ole na ole?
cm: Mgbe m malitere ide mgbe niile M doro anya na m ga-ebipụta. Akwụkwọ ọgụgụ n’enweghị ndị na-agụ ya enweghị isi. Fọdụ ndị edemede ga-ekwu na ha dere maka onwe ha mana okike chọrọ ka ịkekọrịta. Edere akwukwo iji kọwaa ihe, ya mere agha aghaputa ya. O were m afọ iri atọ ka m bipụta ya. Ọ bụrụ na akụkọ mbụ m dị afọ iri na otu, m bipụtara akwụkwọ mbụ m mgbe m dị afọ iri anọ. N'etiti ha, arara m onwe m nye akwụkwọ akụkọ, ebipụtara m ụfọdụ uri na obere akụkọ, mana ibipụta akwụkwọ ọgụgụ dị mgbagwoju anya.
Ebe obibi akwụkwọ na-anwụ. Ọ bụrụ na ọ dị njọ na mbụ, na mbata nke ọrịa a na-efe efe ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ na ụlọ ahịa akwụkwọ ga-emechi. Ọ ga-efu anyị iji naghachi. Ihe niile agbanweela nke ukwuu. Anaghị m ahụ ọdịnihu olile anya, n'ezie.
cm: Amalitere m oria ojoo a na a ọrịa ezinụlọ iji assimilate. COVID bịarutere ọzọ enwere m ọrịa ọzọ sitere n'aka onye otu ezinụlọ nke siri ike karịa. Ha abụwo afọ abụọ siri ike nke m tụgharịrị uche wee kpebie ibi n'ụzọ dị iche na ụkpụrụ ndị ọzọ. O metụtala akwụkwọ m na omume m. Ihe dị mma bụ na mmadụ abụọ ahụ dara ọrịa ugbu a dị mma, nke na-egosi na mgbe ọ bụla ha mechiri ụzọ ha megheere gị windo. Ikekwe otu ihe ahụ na-eme na mbipụta ụwa. Anyị ga-echere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Carolina Molina. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Los ojos de Galdós
Akwụkwọ nke usoro Kadin, nke a maara dị ka Mujer ma ọ bụ Fuerza de Mujer